Need for Speed ပဲ မောင်းနေရတာ ပျင်းနေပြီလား၊ DeathRace ဇာတ်ကားထဲကလို ကားတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ဖန်တီး၊ ပြီးရင် ပြိုင်မောင်း၊ လမ်းမှာအချင်းချင်းတိုက် ခိုက်ရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းကား မောင်းပြိုင်ချင်သူတွေအတွက် Wreckfest ဂိမ်းသစ်လာပါပြီ။ DeathRace နဲ့ မတူတာဆိုလို့ ကားတွေမှာ သေနတ်လို လက်နက်တွေ မပါတာကလွဲရင် ကားတွေကို အကြမ်းခံနိုင်အောင် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ရမှာပါ။ တိုက်ကားမောင်းသလိုပဲ ပြိုင်ပွဲမှာမိမိအနိုင်ရဖို့ အခြားပြိုင်ဘက် ကားတွေထက် မြန်ဖို့လိုအပ်သလို ပြိုင်ဘက်ကားတွေကို နောက်ထပ် ကိုယ့်ကို ပြိုင်ဆိုင်မလာအောင် ပွဲသိမ်းပေးလိုက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကားနား ကပ်လာသမျှ ပြိုင်ကားတွေကို တိုက်ဖယ်ပြီး လမ်းဘေးရောက်အောင် ပို့ပေးလိုက်ပါ။ မဟုတ်ရင်လည်း တခြားကားတွေနဲ့ တိုက်မိပြီးဆက် မပြိုင်နိုင်အောင် ဇာတ်သိမ်းပေးလိုက်ပေါ့။
ဂိမ်းရဲ့ စာသားကိုက Drive Hard. Die Last တဲ့ဗျာ။ မြန်မြန်မောင်း၊ နောက်ဆုံးအထိ ရှင်သန်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဒီပတ်လမ်း မောင်းကားပြိုင်ပွဲထဲမှာ အချင်းချင်း Multi အနေနဲ့လည်း ကစားနိုင်သလို Single အနေနဲ့လည်း ကစားလို့ရတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် ကားအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဆိုင် မောင်းနှင်ရုံတင် မဟုတ်သေးပဲ ပြိုင်ပွဲထဲမှာဗီလိန် ကားကြီး တစ်စင်းလည်း ထည့်ပေးထား
သေးတယ်။ ဒီကားကြီးက လမ်း ရှင်းကားကြီး၊ သံမဏိတွေနဲ့ အခိုင်အခန့် ဖန်တီးထားတာ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် ကားတွေထက် ၅ စီးစာ လောက် ပိုကြီးတဲ့ ကားကြီးကိုပါ ရှင်းထုတ်နိုင်ပြီးမှ သင့်အနေနဲ့ အနိုင်ရမယ်။ ဒီတော့ တစ်စီးချင်း ပြိုင်တိုက်ဖို့တော့ မလွယ်ဘူး ပေါ့။ Multi သမားတွေက ပေါင်းပြီး အခုကားကြီးကို ရှင်းထုတ်ဖို့ လွယ်ပေမယ့် Single ကစားသူ တွေကတော့ စိန်ခေါ်မှု ပိုကြီး သွားပြီပေါ့။
ပုံမှန် ပတ်လမ်းမောင်း ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့လည်း မောင်းနိုင်တယ်၊ နှစ်ယောက်တည်းပုံစံ နှစ်စီးတည်း လည်း ပြိုင်နိုင်တယ်၊ ပတ်လမ်းနဲ့ ဝန်းကျင် အနေအထားတွေလည်း ပြောင်းလဲကစားနိုင်မှာပါ။ ကားရွေးချယ်နိုင်တယ်၊ Auto နဲ့ မောင်းမလား Manual နဲ့ မောင်းမလား၊ ဂီယာစနစ်ပါ ရွေးနိုင်သေးတယ်။ ပြီးတော့ လမ်းကြောင်းရွေးပြီး မောင်း လို့ရပါပြီ။ ပွဲတွေနိုင်လို့ရလာတဲ့ ငွေနဲ့ ကားတွေ ဝယ်ထားနိုင်သလို ပြန်ရောင်းလို့ လည်း ရပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီး တပ်ဆင်မှုတွေလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ဦးမှာပါ။ ဘယ် Item ကို ထည့်လိုက်လို့ ဘယ်လို စွမ်းဆောင်ရည် တက်လာမယ်လို့ ပုံသေနည်းမရှိဘဲ မိမိသဘောကျရာကို စိတ်ကြိုက် တပ်ဆင် ဖန်တီးပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်မှာ
ပါ။ အကြမ်းခံ ဦးစားပေးတပ်ဆင်မှာလား၊ အမြန်နှုန်းဦးစားပေးလား၊ မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့။
ဂိမ်းမှာ အကောင်းဆုံး သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ အချက်က ရုပ်ထွက်ပါ။ တကယ့် ရုပ်ရှင်ကားထဲက ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကားတွေကို မြင်နေရသလို ရုပ်ထွက်က ကောင်းလွန်းတယ်၊ ကားတစ်စီးနဲ့ တစ်စီးတိုက်မိလို့ အပိုင်းအစတွေ လွင့်ထွက်တဲ့ အခန်းတွေမှာတောင် ရုပ်ထွက်က ပီပြင်လွန်းပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မိပါတယ်။ အခုလောလော ဆယ်မှာတော့ Wins သမားအတွက်ပဲ ထွက်ထားသေးတယ် ဆိုပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာက ကွန်ပျူတာနဲ့ ဂိမ်းကစားသူများ တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Console သမားတွေအတွက်ကတော့ ခဏစောင့်ပါ။ PS4 နဲ့ Xbox One သမားတွေအတွက် လာမယ့် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ Version အသစ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုနှစ် ဝက်ကျော် ကာလအထိတော့ ကားပြိုင်ပွဲဂိမ်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဂိမ်းအဖြစ် သတ်မှတ် ခံထားရပါတယ်။
Need for Speed ပဲ မောငျးနရေတာ ပငျြးနပွေီလား၊ DeathRace ဇာတျကားထဲကလို ကားတှကေို ကိုယျ့စိတျကွိုကျ ပွငျဆငျဖနျတီး၊ ပွီးရငျ ပွိုငျမောငျး၊ လမျးမှာအခငျြးခငျြးတိုကျ ခိုကျရငျး ခပျကွမျးကွမျးကား မောငျးပွိုငျခငျြသူတှအေတှကျ Wreckfest ဂိမျးသဈလာပါပွီ။ DeathRace နဲ့ မတူတာဆိုလို့ ကားတှမှော သနေတျလို လကျနကျတှေ မပါတာကလှဲရငျ ကားတှကေို အကွမျးခံနိုငျအောငျ စိတျကွိုကျ ပွငျဆငျပွီး ပွိုငျပှဲဝငျရမှာပါ။ တိုကျကားမောငျးသလိုပဲ ပွိုငျပှဲမှာမိမိအနိုငျရဖို့ အခွားပွိုငျဘကျ ကားတှထေကျ မွနျဖို့လိုအပျသလို ပွိုငျဘကျကားတှကေို နောကျထပျ ကိုယျ့ကို ပွိုငျဆိုငျမလာအောငျ ပှဲသိမျးပေးလိုကျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျ့ကားနား ကပျလာသမြှ ပွိုငျကားတှကေို တိုကျဖယျပွီး လမျးဘေးရောကျအောငျ ပို့ပေးလိုကျပါ။ မဟုတျရငျလညျး တခွားကားတှနေဲ့ တိုကျမိပွီးဆကျ မပွိုငျနိုငျအောငျ ဇာတျသိမျးပေးလိုကျပေါ့။
ဂိမျးရဲ့ စာသားကိုက Drive Hard. Die Last တဲ့ဗြာ။ မွနျမွနျမောငျး၊ နောကျဆုံးအထိ ရှငျသနျနိုငျအောငျ ကွိုးစားရမယျ။ ဒီပတျလမျး မောငျးကားပွိုငျပှဲထဲမှာ အခငျြးခငျြး Multi အနနေဲ့လညျး ကစားနိုငျသလို Single အနနေဲ့လညျး ကစားလို့ရတယျ။ ပွိုငျပှဲဝငျ ကားအခငျြးခငျြး တိုကျခိုကျပွိုငျဆိုငျ မောငျးနှငျရုံတငျ မဟုတျသေးပဲ ပွိုငျပှဲထဲမှာဗီလိနျ ကားကွီး တဈစငျးလညျး ထညျ့ပေးထား
သေးတယျ။ ဒီကားကွီးက လမျး ရှငျးကားကွီး၊ သံမဏိတှနေဲ့ အခိုငျအခနျ့ ဖနျတီးထားတာ၊ ပွိုငျပှဲဝငျ ကားတှထေကျ ၅ စီးစာ လောကျ ပိုကွီးတဲ့ ကားကွီးကိုပါ ရှငျးထုတျနိုငျပွီးမှ သငျ့အနနေဲ့ အနိုငျရမယျ။ ဒီတော့ တဈစီးခငျြး ပွိုငျတိုကျဖို့တော့ မလှယျဘူး ပေါ့။ Multi သမားတှကေ ပေါငျးပွီး အခုကားကွီးကို ရှငျးထုတျဖို့ လှယျပမေယျ့ Single ကစားသူ တှကေတော့ စိနျချေါမှု ပိုကွီး သှားပွီပေါ့။
ပုံမှနျ ပတျလမျးမောငျး ပွိုငျပှဲအနနေဲ့လညျး မောငျးနိုငျတယျ၊ နှဈယောကျတညျးပုံစံ နှဈစီးတညျး လညျး ပွိုငျနိုငျတယျ၊ ပတျလမျးနဲ့ ဝနျးကငျြ အနအေထားတှလေညျး ပွောငျးလဲကစားနိုငျမှာပါ။ ကားရှေးခယျြနိုငျတယျ၊ Auto နဲ့ မောငျး မလား Manual နဲ့ မောငျးမလား၊ ဂီယာစနဈပါ ရှေးနိုငျသေးတယျ။ ပွီးတော့ လမျးကွောငျးရှေးပွီး မောငျး လို့ရပါပွီ။ ပှဲတှနေိုငျလို့ရလာတဲ့ ငှနေဲ့ ကားတှေ ဝယျထားနိုငျသလို ပွနျရောငျးလို့ လညျး ရပါတယျ။ စိတျကွိုကျဖနျတီး တပျဆငျမှုတှလေညျး လုပျဆောငျနျိုငျဦးမှာပါ။ ဘယျ Item ကို ထညျ့လိုကျလို့ ဘယျလို စှမျးဆောငျရညျ တကျလာမယျလို့ ပုံသနေညျးမရှိဘဲ မိမိသဘောကရြာကို စိတျကွိုကျ တပျဆငျ ဖနျတီးပွီး ပွိုငျပှဲဝငျနိုငျမှာ
ပါ။ အကွမျးခံ ဦးစားပေးတပျဆငျမှာလား၊ အမွနျနှုနျးဦးစားပေး လား၊ မိမိစိတျကွိုကျပေါ့။
ဂိမျးမှာ အကောငျးဆုံး သဘောကစြရာကောငျးတဲ့ အခကျြက ရုပျထှကျပါ။ တကယျ့ ရုပျရှငျကားထဲက ပတျဝနျးကငျြနဲ့ ကားတှကေို မွငျနရေသလို ရုပျထှကျက ကောငျးလှနျးတယျ၊ ကားတဈစီးနဲ့ တဈစီးတိုကျမိလို့ အပိုငျးအစတှေ လှငျ့ထှကျတဲ့ အခနျးတှမှောတောငျ ရုပျထှကျက ပီပွငျလှနျးပါတယျ။ စိတျကွိုကျဖွဈမိပါတယျ။ အခုလောလော ဆယျမှာတော့ Wins သမားအတှကျပဲ ထှကျထားသေးတယျ ဆိုပမေယျ့ ပွညျတှငျးမှာက ကှနျပြူတာနဲ့ ဂိမျးကစားသူမြား တော့ အဆငျပွပေါတယျ။ Console သမားတှအေတှကျကတော့ ခဏစောငျ့ပါ။ PS4 နဲ့ Xbox One သမားတှအေတှကျ လာမယျ့ နိုဝငျဘာလထဲမှာ Version အသဈထှကျလာပါလိမျ့မယျ။ အခုနှဈ ၀ကျကြျော ကာလအထိတော့ ကားပွိုငျပှဲဂိမျးတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံးဂိမျးအဖွဈ သတျမှတျ ခံထားရပါတယျ။